Wabiga Shabeelle oo xalay fatahaad ka geystay deegaanada Moyko iyo ee duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wabiga Shabeelle oo xalay fatahaad ka geystay deegaanada Moyko iyo ee duleedka...
Wabiga Shabeelle oo xalay fatahaad ka geystay deegaanada Moyko iyo ee duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in Wabiga Shabeelle uu xalay fatahaad ka geystay deegaanada Moyko iyo Baarey oo dhaca duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Wararka ayaa sheegaya in maamulka magaaladaasi ay wadaan saakay dadaallo xoog leh oo ay wadaan maamulka magaalada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe, si loo xakameeyo fatahaada uu bilaabay wabiga Shabeelle.
Deegaanka Moyko oo qiyaastii 1-KM koonfur bari ka xiga Jowhar ayuu fatahaada ugu badan xalay ka geystay wabiga Shabeelle, waxayna biyaha ka fatahay wabiga xireen wadooyinka soo gala deegaanka Moyko, iyagoo saameyn xoog leh u geystay guryo iyo goobo ganacsi oo deegaanka ku yaalla.
Sidoo kale magaalada Jowhar ayey soo gaareen biyaha ka soo fatahay halka wabigu ka maro deegaanka Moyko, dhanka kale deegaanka Baarey oo qiyaastii 5-KM waqooyi ka xiga caasimadda HirShabeelle ee Jowhar ayuu xalay fatahaad kale ka geystay wabiga Shabeelle.
Previous articleMadaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Maxamed C/llaahi farmaajo oo Goor dhaw hor tagaya Golaha shacabka Baarlamaanka
Next articleXoghayaha warfaafinta Mareykanka Jen Psaki oo sheegtay in maamulka madaxweyne Joe Biden ay go’aan ka gaareen soo galootiga Hindiya
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa xayiraadii ka qaaday qalashada iyo iibinta hilibka dameeraha oo ay dowladda saartay bishii Febraayo ee sanadkii hore. Dacwad...
Daagaal qaraar oo ka socda degaan hoostago Degmada Guriceel